Afrika, 02 January 2020
Khamiis 2 January 2020
Koox la tuhmayo inay Shabaab yihiin oo bas ku weeraray Lamu
Warbaahinta Kenya ayaa tebinaysa in maleeshiyaa looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay maanta weerareen bas marayey degaanka Nyongoro oo ka tirsan gobolka xeebta ee LAMU.
Uganda oo raadineysa deyn ku dhow $2 bilyan
Uganda ayaa sheegtay inay qorsheyneyso inay soo daynsato 1.89 bilyan oo dollar, si ay uga kabto miisaaniyadda muddo sanadeedka July 2020 illaa June 2021.
Afwerki oo ballan-qaaday inuu dib u xoojiyo xiriirka Ethiopia
Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa khamiistii ballan-qaaday inuu xoojin doono wada-shaqeynta kala dhaxeysa Itoobiya, isaga oo ku guda jiray maalintii ugu dambeysay booqasho laba maalmood ah, oo loo arkay inay timid xilli hanaankii nabadda labada dal uu gaabiyey.
Koox ku xiran Daacish oo sheegay inay 11 qof ku dileen Nigeria
Jihaadiyiin ku xiran kooxda Daacish ayaa baahiyey muuqaal ay sheegeen inuu muujinayo dilka 11 qof oo Kirishtan ah, waqooyiga bari ee dalka Nigeria.
Turkiga oo ciidamo u diraya Libya
Biyo la'aan ka jirta xerada Dhadhaab
Saddex maalmood ayey xaalad biyo la’an ah ku sugan yihiin in ka badan 2,000 kun oo qoys oo ku nool xerada qaxootiga ee Dhagaxley ee ka tirsan xeryaha Dhadhaab kadib markii ay jabeen ceelashii biyaha ay ka dhaansan jireen qaxootiga.
Madaxweyne Afwerki oo gaaray Addis-Ababa
Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa maanta gaaray magaalada Addis-Ababa, halkaasi oo uu ra’iisul wasaaraha Itoobiya kula yeelanayo kulankii ugu horreeyey tan iyo markii uu abaal-marinta nabadda ee Nobel Peace Prize ku helay billaabidda heshiiska labada dal.
Dad badan oo lagu laayay Burkina Faso
Madaxweynaha dalka Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore, ayaa xaqiijiyay dhimashada 35 qof oo rayid ah oo dumar u badnaa oo lagu dilay, weerar Talaadadi ay koox mintidiin Muslimiin ah ku qaadeen waqooyiga dalka Burkina Faso.
Banaanbaxyo ka dhacay magaalada Jigjiga
Bannaanbaxyo ayaa ka dhacay magaalada Jigjiga ee Ismaamulka Soomaalida kuwaasi oo looga soo horjeeday gubistii masaajiddada ku yaallay magaalada Mota ee Gobolka Amxaarada.
Sarkaal cusub oo loo magacaabay amniga Waqooyi Bari Kenya
Ethiopia: Masaajid Weerar lagu Qaaday
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa caambaareeyey weerarro loo gaystay xarumo diimeed magaalada Moota ee Gobolka Amxaarada habeen hore
Sharci hor-yaalla baarlamanka Itoobiya oo laga digay
Sharci cusub oo ay ka fakareyso Itoobiya ayaa lagu qeexay mid halis ku ah xoriyadda hadalka iyo internet-ka.